Imikhiqizo yenjini Factory - Imikhiqizo yenjini yaseChina Abakhiqizi, Abahlinzeki
izinjini zokuphehla amandla-43KW-Y4110D
izinjini zomlilo nezamanzi-29KW-YD480
izinjini zomlilo nezamanzi-55KW-Y4100
izinjini zokuphehla amandla-350KW-YM6S9L-DA
Njengomakhiqizi ogandaganda onamavili eChina, thina e-YTO singenza izinhlobo ezahlukene zezitreji ezinamasondo, ezinamandla asukela ku-18 kuye ku-500HP, Ngokusho kwemodi yayo yokushayela, ugandaganda onamasondo ngokuvamile angahlukaniswa ngogandaganda abangu-2WD kanye nogandaganda ongu-4WD. Ngenjini eyisebenzisayo, ugandaganda onamasondo ngokuyinhloko ufaka ugandaganda ongu-2 silinda, 3 silinda ugandaganda, ugandaganda ongu-4 isilinda kanye nogandaganda ayi-6 silinda. Ngokusho kwezicelo zayo ezithile, ugandaganda ungahlukaniswa ngogandaganda wepulazi ...
Isethi yomlilo namanzi
I-YTO POWER inikezela ngomlilo osezingeni eliphakeme wedizili nepayipi lamanzi elungiselelwe izinjini zethu ezisebenza ngezinjini zethu zokuzikhiqiza, isethi yethu yokushisa umlilo nethangi lamanzi ingahlangana ne-Australia, Middle East kanye ne-Europe standard, singenza iphampu isethwe ngokuhambisana nemfuneko ekhethekile yeKhasimende. Amaphampu ethu likadizili ochungechunge afanele ukuhanjiswa kwamanzi kwezimboni kanye nedolobha, ukugeleza kwamanzi, futhi okusetshenziselwa kakhulu ukunisela kwezolimo, ukuthutha amanzi amsulwa noma obunye uketshezi obunjengobumvelo bamakhemikhali nobungamakhemikhali. F ...
Ukuhlangana Nokuhlola: 1.First-class line line 2.Atlas Copco Amathuluzi kanye noMhlangano System. I-3.AVL injini yedizili yokuhlanganisa injini yokuhlaziya i-4.Dizeli yokuhlola injini yokuhlola indawo 5.Ingosi yokuhlola engaphezulu ye-6.Nature injini yokuhlola i-injini ye-YTO AMANDLA inikeza i-YANGDONG esezingeni eliphakeme nesethi ye-generator yedizili ye-YTO, amandla afinyelela ku-10kva aya ku-500kva, uhlobo oluvulekile nohlobo lokuthula, 50HZ no-60HZ. Izinzuzo Nezici 1.Izinjini ezikhiqizwe uSelf ziqinisekiswa ngekhwalithi ethembekile, Inani elihle le ...